Single-isigwedlo labathaki bamafutha athandwa kakhulu phakathi kwabantu. Lokhu kungenxa kanjalo kubeka isimo sabo, ukuqina kanye liyasiza. Ziyakwazi elula ezanele design imigomo, omunye isigwedlo eqala umsebenzi we two heads valve. Ukugeleza izinga namanzi lokushisa ilawulwa turning isibambo ohlangothini oyifunayo.
Elikhulu ekuphileni isevisi okuqinisekisiwe sibonga ukungabi khona izingxenye zensimbi. Kodwa kungenzeka izakhi mixer Ceramic ezilimele ngenxa ukungcola yesihlabathi doti, okuyinto kuhlulekile isihlungi achazwe. Kuyinto Kulezo zimo, kungase kudingeke ukuba balungise mixer for yokugezela noma ekhishini. Ikhanda Kulungile uma ungakwazi kahle bese uphendukisa ingalo crane kalula. Ngisho ujamu ezincane esibayeni kungase kubonise a igobolondo iphutha. Kulokhu, kufanele uthenge futhi ifake igobolondo entsha ukuvimbela ukuvuza amanzi. Njengoba kukhona izinhlobo eziningana zazo, omunye komunye, angase ezihlukile futhi osayizi we yokuxhuma evele. Yingakho kubalulekile ukukhetha uhlobo olufanele ngaphambi kokuqhubeka ukuliqaqa.
Uma mixer yakho kuhlulekile ngenxa zokugwema ukuphuka of igobolondo, uzodinga ukulishintsha. Lo msebenzi akunzima, kubalulekile kuphela ukuqonda ukulandelana imisebenzi edingekayo ukwenza. Ngakho, indlela esikhundleni igobolondo toner in a blender? Kubalulekile ukuqonda ukuthi ngaphambi noma yimuphi umsebenzi liyadingeka ukuvimba amanzi, bese uvale imbobo echibini noma ubhavu.
Indlela ukushintsha igobolondo toner e mixer: ukulandelana kwemisebenzi
Okokuqala kufanele ususe isibambo, kungenjalo udinga ukuya lento ukuba yinkinga. It is kuvikelwe induku zungeza esebenzisa screw olukhethekile igobolondo. Ehola screw kungenziwa ngamakhasimende noma Phillips noma ngaphansi evamile ukufakwa kokumqoka kuphela ngqo, kwesinye isikhathi kwenziwa ngaphansi hex. Futhi ukubona ikhanda isikulufo, kumelwe ususe bezel blank kuqala. Ngokuvamile eyenziwe ngepulasitiki noma irabha, futhi ekhishwe kalula kakhulu. Kungase kwenzeke ukuthi i-plug iraba liyadingeka podkovyrnut, kodwa kwaba njalo endabeni ka plastic kuyoba okwanele ukuba ngixhumane a uzipho.
Lapho cap isusiwe, inhloko isikulufa uzovela phambi kwakho, ukuvumela ukuba ukhethe ukufakwa kokumqoka kuphela ilungelo edingekayo. Clamping isikulufa akudingekile ukusonta kuze kube sekupheleni, kungaba 3-4 ematfuba. Lokhu ngokuvamile okwanele ukususa isibambo. Okulandelayo udinga ukususa noma athambise nut zokuhlobisa, ngokuvamile yenziwa ukuze kungenziwa izandla unscrewed, ngaphandle kokusebenzisa amathuluzi ezengeziwe. Ezinye labathaki bamafutha ahlelwe ukuze nut clamping kuzo ubuyisela ubakaki ukuphokophela. Kungaba zisuswe ngumuntu ukufakwa kokumqoka kuphela Phillips, futhi nut clamping kulokhu sisuswa esebenzisa ukhiye 30.
Ngakho manje-ke sifika umbuzo indlela esikhundleni igobolondo toner in a blender linamathele kuwo ngokwanele. Ngemuva kokuthi ususe nut clamping noma ubakaki, ungaqala kokukhipha igobolondo, ezimweni ethile lo msebenzi ngeke kudingeke ukuba usebenzise impintshisi, ubambe kushaft yokunyathelisa. Ngezinye izikhathi ungase uthole le ucezu amanzi, kodwa kuhle ukwenza phambi kothile kulo muntu livaleke amanzi. Yiqiniso, kungenzeka ukuba bafeze lo inqubo ngokwabo. Kepha uma engathandi ukukuhlenga emva amandla kwaphoqa ingcindezi, awukwazi ukuvala amanzi, futhi nje ukudonsa lize ngeke asivumele leso.
Njengoba ezothatha isikhundla igobolondo e blender wenziwa kahle, kubalulekile ukuthi entsha noma ezinamafutha akahle ubudala wasibona imilenze emigodini samanje emzimbeni mixer. Imilenze igobolondo, futhi ngezinye izikhathi iraba gasket akunqandi uyisuse. Uma efakwe endaweni efanele futhi nut clamping is kuvikelwe, udinga ukuhlola okuhlangene ukuvuza. Lokhu kungenziwa ngokuvula amanzi kanye isheke khona iyiphi ukuvuza. Uma kungekho amanzi ageleza, kungenzeka ukuqedela inqubo emhlanganweni.
Manje uyazi ukuthi ukushintsha igobolondo toner e mixer.
Ikhabethe egumbini lokugezela - ekahle izikhala ezincane
Socionics. "Balzac": incazelo yohlobo
Lactose-free ubisi: abakhiqizi, ubuchwepheshe, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Umqhele wamazinyo wokufakela: ukulungiswa kokufakwa
Yini iplanethi ngaphezulu - Mars noma Ngomhlaba? Solar uhlelo amaplanethi osayizi zabo
TNP: emagama izifinyezo